LGBTQ IiVimba zoLondolozo lweeNdaba - OutBüro
tag: LGBTQ Amaphephandaba
Isithuba sama-95% se LGBTQ Shicilela kunye neMithombo yeendaba kwi-Intanethi: URivendell
Oktobha 19, 2020 (Ihlaziyiwe ngoJuni 6, 2021) E papashwe ngu UDennis Velco
Kule ngqungquthela yeeVoBoro Voices ezibandakanya LGBTIingcali ze-Q, oosomashishini, kunye neenkokheli zoluntu kwihlabathi liphela, bamba izingxoxo zikaDennis Velco noT Todd Evans, umphathi weRivendell Media.
I-Rivendell Media ineminyaka engaphezulu kwama-42 yokuba yinxalenye ebalulekileyo ye LGBTQ uluntu. Imele malunga ne-95% yazo zonke LGBTQ ukushicilela kunye nemithombo yeendaba ekwi-Intanethi eMelika nase Canada. Banceda iinkampani zosasazo ukuba zikhule kwaye zihlale ziphila ngokuzisa intengiso kumaphephandaba, upapasho lweemagazini kunye newebhusayithi. Ukuba ibingeyondlela yokudityaniswa kukaRivendell uninzi lwasekhaya LGBTAmaphephandaba e-Q, iimagazini kunye neewebhusayithi zinokuzabalaza kungenjalo kufuneka zisebenzele abameli bazo bokuthengisa.
39: 45 UTodd uthi, “Ndifunda yonke into LGBTQ ukupapashwa eMelika, Canada nakwilizwe liphela kwaye akukho nto injengayo indawo yakho (OutBüro). Akukho nto ejolise kushishino phakathi LGBTQ media apho ungabelana khona ngenene. Ndikhuthaza kakhulu wonke umntu ukuba athathe inxaxheba ngakumbi ukuba unengqondo yeshishini. Ishishini yiyo ehambise imarike yethu (imiba) phambili. ”
Umsunguli kaRivendell ekuqaleni wayengumxhasi womculo. Ukhuthaze iJefferson Airplane kunye noElton John. Wathatha uhambo kukhenketho lokuqala lwaseMelika luka-Elton John ekhuthaza iikonsathi zakhe kuwo onke amaphephandaba esixeko abanokufikelela kuwo. Emva kohambo luka-Elton, umseki wajika bonke abo bantu banxibelelana nabo baba lithuba elitsha loshishino. Kwibali elipheleleyo kwinkampani, ukumamela kwimbali njengoko uT Todd Evans enika ukuqonda okukhulu. Amanqaku aya kwiiArhente zeNtengiso kwizicwangciso kwiinkqubo zentengiso kunye noyilo loyilo. Ke iiarhente zentengiso zisebenza noRivendell ukuya fikelela kwi- LGBTQ abaphulaphuli kuyo yonke LGBTIimpawu zeendaba ze-Q abazimele. Kwindlela ebanzi kodwa ehlanganisiweyo. UTodd Evans uqhutywa sisizathu sokulingana. Bayazi ukuba banceda iinkampani zosasazo ukuba zikwazi ukugubungela iindaba kunye nezihloko ezibalulekileyo kuluntu. Sinencoko emnandi malunga nefuthe le LGBTQ eendaba. Ukudityaniswa kwentengiso yokuthenga kwenza intengiso kwi LGBTImithombo yeendaba ye-Q iyenziwa kwaye inqweneleka. Yedwa kwaneyona inkulu LGBTImithombo yeendaba ye-Q incinci kunamaphulo emveli esizwe eendaba anokuyijonga. Uninzi lwelGBTImidiya ye-Q yeyasekhaya. Ukuba iiarhente zentengiso kuye kwafuneka zilandelele ngokwazo kwaye zithenge kwiinkampani zosasazo zalapha ekhaya ukuze zifumane ivolumu eziyifunayo, umsebenzi wokwenza njalo ungangabizi mali. Ke uRivendell nabo bonke ubudlelwane babo benza kube lula Iimpawu kunye neearhente zabo zentengiso ezokwenza ishishini nazo LGBTQ eendaba. Ukungena kwakho, ubhaliso, kunye neembono ze LGBTQ amaphephandaba, upapasho kunye newebhusayithi kubaluleke kakhulu. Baxhomekeke kwintengiso ukuze bahlale kushishino. Mamela inkcazo kaT Todd. Utata uxoxa malunga nokuba kanjani LGBTImithombo yeendaba ye-Q iyaziqhelanisa ukuze iphile kwisoyikiso se-COVID kunye nabo babhengezi abakhulu abagcina intengiso egcina izibane zikhanyisela abaninzi.
Nxibelelana noTodd kwi-OutBüro. https://www.outburo.com/profile/toddrivendellmedia-com/
Joyina u-Todd kwi-OutBüro, i LGBTUQ wobungcali kunye nosomashishini uthungelwano loluntu kwi-intanethi yesini, isini, isini, transgender, queer, Amanyeneyo nabaqeshi bethu abaxhasayo LGBTQ ukwamkela ukulingana emsebenzini kugxilwe kwizibonelelo, imigaqo-nkqubo, kunye neendlela zeshishini. https://www.OutBuro.com
tags: LGBTQ Intengiso, LGBTQ Ukuthengisa, LGBTQ Imidiya, LGBTQ Amaphephandaba, LGBTQ Ushicilelo